Shina 2021 farany famolavolana 3″ maina mampiasa diamondra polishing pads ho an'ny simenitra sy terrazzo Manufacturing sy Factory | Bontai
2021 farany famolavolana 3″ maina mampiasa diamondra polishing pads ho an'ny simenitra sy terrazzo
Ity no endrika farany 3 "maina mampiasa torx polishing pads, mety amin'ny famolahana gorodona vita amin'ny simenitra, tena maranitra izy ireo ary manana spanlife lava kokoa noho ny pad mahazatra. Amin'izay fotoana izay ihany, dia mety hahatonga ny gorodonao hanana vokatra fitaratra lehibe. nahazo valiny tsara maro avy amin'ny mpanjifanay maro.
Savaivony: 3 inch
Fampiharana: Ho an'ny famolahana beton sy terrazzo
Fitaovana: diamondra + resin
Masinina ampiharina: Fitotoana gorodona
fandefasana : Amin'ny fomba mazava, amin'ny rivotra, amin'ny ranomasina
Ora nanomezana: 7-20 andro mifototra amin'ny habetsahan'ny baiko
diamondra + resin
Ho an'ny famolahana beton, gorodona terrazzo
Fitotoana gorodona sy dingana poloney
Ny fitaovana mahomby indrindra dia mihatra amin'ny famolahana haingana ny gorodona vita amin'ny simenitra na terrazzo aorian'ny fikosoham-bary matevina. Dingana 7 avy amin'ny grits 50,100,200,400,800,1500,3000#.
Dingana 1 : Fikosehana vy matevina
-Ho an'ny fikosoham-bary beton, azonao atao ny mampiasa pads diamondra metaly mba hanotofana amin'ny grenady toy ny 6 # / 16 # na 25 # / 30 # hanombohana eo amin'ny gorodonao, dia miverena amin'ny fitotoana antonony sy tsara.
Dingana 2 : Vata fametahana resin
-Ho an'ny dingana farany amin'ny famolahana resin amin'ny tany mba hahatongavana amin'ny faritra manjelanjelatra. (miankina amin'ny toetry ny tany izany)
1. Tena mahery setra sy mateza, esory haingana ny scratches amin'ny diamondra metaly.(50#-100#-200#)
2. Hafainganam-pandeha miloko haingana kokoa, fiainana miasa lava kokoa, mazava kokoa sy mamirapiratra mamirapiratra.(400#-3000#)
3. Manome tolotra fanamboarana ihany koa izahay mba hamenoana ny fepetra manokana
Amin'ny maha-famokarana azy, Bontai dia efa namolavola fitaovana avo lenta ary nandray anjara ihany koa tamin'ny fametrahana ny fenitra nasionaly ho an'ny fitaovana mahery vaika manana traikefa mihoatra ny 30 taona. Manam-pahaizana manokana amin'ny teknolojia Grinding sy Polishing izahay, ny lehiben'ny injeniera dia nahazo mari-pahaizana tamin'ny "Shina Super Hard Materials" Rehefa 1996, nitarika ny vondrona manam-pahaizana momba ny fitaovana diamondra. Ny mpanamboatra anay dia nandalo ISO90001: 2000 fanamarinana ary manana ekipa injeniera manokana sy ekipa fikarohana sy fampandrosoana. Nahazo patanty 20 mahery sy mari-pamantarana marika maromaro izahay hatreto.
Rosia Stone Industry 2019
Araka ny aseho amin'ny sary, dia tetikasa ao amin'ny orinasa mpanamboatra kodiarana Nanjing izy io, izay manana velarantany 130.000². Tsy vitan'ny hoe afaka manome fitaovana avo lenta ihany i BonTai, fa afaka manao ny fanavaozana ara-teknika ihany koa mba hamahana ny olana rehetra rehefa mitoto sy manosotra amin'ny gorodona isan-karazany.
Akora nafarana nafarana
Miaraka amin'ny fahalalana vokatra matihanina sy rafitra serivisy tsara ao amin'ny ekipa BonTai, tsy vitan'ny hoe mamaha ny vokatra tsara sy mahasoa indrindra ho anao izahay, fa mamaha ny olana ara-teknika ho anao ihany koa. Aza misalasala mifandray aminay
F: Orinasa ve ianao na orinasa mpivarotra?
A: Azo antoka orinasa izahay. Tongasoa eto aminay mba hanamarina izany.
A: Misy santionany miaraka amin'ny sarany.
F: Raha mila fanohanana ara-teknika izahay, afaka manolotra anay ve ianao?
A: Eny, manana ekipa za-draharaha izahay, manolotra tombontsoa fanampiny ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny torohevitra manokana, avy amin'ny mpiasan'ny fitantanana ny vokatra, ny injeniera ary ny teknisiana.
F: Inona ny fotoana fanaterana anao?
A: Amin'ny ankapobeny 7-15 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko, miankina amin'ny habetsahanao.
F: Afaka mandeha mitsidika ny orinasanao ve aho?
A: Eny Mazava ho azy. Tonga soa. Azafady antsoy na mailaka izahay alohan'ny fitsidihanao.
teo aloha: Orinasa matihanina ho an'ny Shina 100mm Turbo Diamond Grinding Cup Wheel for Concrete
Manaraka: Top Quality Shina 4.5 7 mirefy andalana simenitra Brazed diamondra fitotoana kodia kaopy
Metal segmented diamondra zero fandeferana fitotoana ...